Indlela anakekele Aloe vera? Aloe ekhaya. Aloe: ukutshala
Sekuyisikhathi eside elwa namagciwane eyaziwa futhi ephulukisa izakhiwo Aloe. Lesi sitshalo kabanzi lisetshenziswe Cosmetology nemithi, kodwa ngenxa emizi eziningi zokufuna njalo nginazo le "umelaphi", uncamela sikhule Aloe vera ekhaya. Naphezu kweqiniso lokuthi lesi simila kuyinto linesizotha, kodwa kufanele wazi ezinye izici okuqukethwe. Ngakho, indlela yokunakekela Aloe kwesokudla?
Lesi sitshalo uthanda ukukhanya okukhulu oqondile, ngakho kungcono ukubeka isitsha sezimbali eduze amafasitela ebhekene ecaleni lasempumalanga noma eningizimu. Ukuze Aloe akusho zihlupheka ngenxa yokuntuleka ekukhanyeni ngenkathi ezibandayo, kufanele kube ngalesi sikhathi ukudala izibani, usebenzisa le njongo, izibani Fluorescent noma izibani Fluorescent. Nge ukufika kwentwasahlobo kuwusizo ukufundisa "udokotela ekhaya 'ilanga, kodwa kubalulekile ukukwenza kancane kancane, njengoba kungenjalo amathuba ukusha.
Ukuze Aloe ebulalayo amanzi amaningi, okuyinto kuveza a amanzi amile ku sump. Lokhu kungenxa yokuthi izimpande izitshalo bantekenteke kakhulu futhi ngenxa yalokho othambekele kwamazinyo. Indlela anakekele Aloe ekungilo umbono umswakama walo kudingekile? Ngakho, kungcono kakhulu ngamanzi ekushoniseni ibhodwe isitshalo emanzini imizuzu 7-10. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi akukho ekuqongeleleni yamanzi rosette amaqabunga.
Kuyaziwa ukuthi amaqabunga zalesi sihlahla unekhono ukugcina amanani elikhulu umswakama. Nokho, waterlogging Aloe ongamthandi, ikakhulu kwesikhathi ebusika. Ngakho, lesi sitshalo kufanele uyophuziswa ngobuningi ehlobo, isikhathi esingu-1 ngesonto, kuyilapho ebusika kuyoba omunye ngokwanele ukuchelela ngenyanga. Phakathi waterings kufanele unike substrate kancane eyomile.
Umswakama kanye lokushisa
Aloe - unesitshalo, okuyiwona izinkomba emaphaketheni nomswakama musa inendima ekhethekile, njengoba bonke abangaphansi kwalesi umndeni, abameleli buthule ukubekezelela kokubili umoya omile futhi olumanzi. Ngenkathi efudumele Aloe engcono kuba ekamelweni lokushisa, kuyilapho isitshalo ebusika kuyinto lokushisa kumelwe 12-14 ° C. Nge yakhe non-ukuhambisana Aloe ngeke bakwazi ukungena enkathini ukuphumula.
Substrate futhi kwezitho
Repot isitshalo kufanele kuphela, uma kunesidingo, uma izimpande usukhulile eliyinkimbinkimbi kangangokuba ayisekho kufanelekile ebhodweni. Repotting is arcade kwenziwa entwasahlobo. Lokhu kungenxa yokuthi yiso kulesi sikhathi sokuphila ligcwele Aloe juice, futhi amathuba okuthi izitshalo kucedvwa anda.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izimo enhlaba khulula ikakhulu elimila ezomile ubumba-isihlabathi enhlabathini. Ngenxa yalesi sizathu-ke is hhayi Kunconywa ukuba repot isitshalo endaweni inhlabathi evundile. Ngeke ize isebenze kahle kokwehla nobumba esindayo nenhlabathi. Uma ufuna ukuba ukhule Aloe njengoba isitshalo isitshalo kahle? abatshali abanolwazi ukuncoma ukuthenga kule nhlabathi lenzelwa amaSucculents ezikhulayo.
substrate zingenziwa uma uthanda futhi ngokuzimela. Lokhu kuzodinga phansi Turf (izingxenye 2), phansi ishidi, humus nesihlabathi (1 okuyingxenye), lapho kufanele ukungezwa namalahle kanye isitini fake olwembiza. Ngokuvamile, ukufakelwa izitshalo omdala Kunenkolelo 1 isikhathi engu-3, kanti zezinhlobo abasha kufanele utshalwe njalo ngonyaka.
Izindlela esiphelweni enhlaba, okuyinto lihlotshiswe isithombe izitshalo zokwelapha emakhasini izincwadi, ezahlukene. izitshalo okusakazwa kungaba cuttings, imbewu, amahlamvu lonke futhi Bokuhlela basal. Cuttings ukuba bafeze cishe unyaka wonke, kodwa kungcono ukwenza kube ehlobo noma entwasahlobo. Lapho amahlamvu Aloe usanda inqubo obumba isokhethi, udinga ukuhlukanisa cuttings isitshalo noma side amahlumela. Kule midlalo, ingcina ngeke sokukhipha ijusi, futhi ngenxa yalokho kufanele ubavumele ukuze ome kahle kuqala, futhi ngemva - utshale.
Kunconywa ukuba afeze yokudla Aloe. Okuphakelayo isitshalo kufanele ibe asebenzayo isikhathi ukukhula entwasahlobo, kanye 2 amaviki. Ezihlukahlukene ezikhona nomanyolo for izitshalo zasendlini kuyadingeka ukuze ayeke ukukhetha kulawo okuyinto zenzelwe amaSucculents kanye Cacti. I Aloe phansi angeke abeke Peat nomanyolo okusezingeni eliphezulu ekhiqizwa on ngesisekelo yayo. Kuyasiza bazogcwalisa phansi nitrogen-oqukethe fertilizer.
Uma ungazi indlela yokunakekela Aloe futhi kahle, into yokuqala kuyothonya ukubonakala amaqabunga, ngakho-ke le ngxenye isitshalo kuyadingeka ukuze unake okukhethekile.
Ngakho, amahlamvu Aloe kufanele zikhule kusukela phansi simila. Uma amaqabunga goba noma ezimila eceleni, cishe, Aloe sintula elangeni. Uma amaqabunga ukoma zizace, izitshalo cishe ngeke amanzi anele, futhi kuba ukuze silondoloze umswakama, baqala ukusebenzisa juice ayo.
Uma amaqabunga zalesi sihlahla atholwe umbala onsundu, ngokusobala Aloe uthola elangeni ngokweqile. Esimweni esinjalo ebhodweni ne isitshalo ukuthuthela kwenye indawo, lapho imisebe yelanga akuzona njengoba nolaka.
Uma Aloe ukhula kancane, kungaba enhlabathini noma amanzi une-overabundance of alikhali. Kuyadingeka kulesi simo ukuyeka ukusetshenziswa manyolo organic.
Indlela anakekele Aloe vera ukuvikela izitshalo ekuhlaselweni izinambuzane yayo ehlukahlukene? Ukuze wenze lokhu, kufanele ahlole njalo isitshalo kanye ukuthola izimpawu asolisayo ukuthatha izinyathelo ngokushesha. Ngesikhathi esifanayo ukubaluleka okukhulu kuyisinqumo uphethwe yini. Aloe kungathinta izinambuzane ezifana:
Scale izinambuzane. Yena sucks ijusi enhlaba, futhi kunomthelela ukuthuthukiswa izifo fungal nangesikhunta. Ukuze balwe isitshalo umoba kufanele ahlanze necebo uviniga. Futhi ukubhubhisa izibungu izinambuzane esikalini liyadingeka ukucubungula zinambuzane, ngenkathi kukhethwa zinambuzane nge ehlukahlukene yasakazwa okungenzeka senzo.
Nematodes. Uma kukhona atholakala bathinteke ukusika izimpande izitshalo, bese Aloe abhebhezela futhi. Futhi, ukuthambisa kwenhlabathi sisetshenziswa usebenzisa izidakamizwa ezifana "Vidat" futhi "Tekt".
Spider ngomnikelo omncane. Lahla lokhu inkathazo kuzosiza fafaza izitshalo nge izixazululo garlic tincture kanye notshwala ukumnika abandayo ugwayi noma insipho. amakhemikhali ezikhethekile, lapho kuthiwa kuhloswe ukususa yizimbuzane, "Fitoverm", "Neoron", "Rogor".
Ukwazi indlela yokunakekela Aloe, ungahlala nginazo le "udokotela indlu", izakhiwo ewusizo ezivuma izitshalo esisemqoka ekwelapheni izifo eziningi.
Imbali i romantics - rose Osiana
Lokuzaliswa jasmine cuttings, kanye nangezinye izindlela
Ornamental isitshalo Fitton ukuxubana: ukunakekelwa ekhaya
Izifo ficus: Izinhlobo kanye Ukwelashwa
Violet lokulala - ekunakekeleni izimbali ezinhle
Utamatisi Chocolate: izici izinhlobo
Dermabrasion: ukubuyekezwa, izinhlobo, izinkomba, amanani
Indlela yokwenza amazambane sikadali e multivarka nge inyama iyisitshulu? embodiments abahlukahlukene ethandwa ukupheka ukudla
Indlela thunga ncwadi log?
Fashion Tips: sizogqokani ijazi ngesikhumba semvu?
Law and ezinjenge elilodwa elalingaphandle efulethini-Igumbi ezimbili
French izinzipho iDemo - a win win for the izandla uzilungise
"Gastrotsepin": yokusetshenziswa. Analogs "gastrotsepin"
Ukupheka croutons okumnandi okwenziwe ngokhilimu omuncu